Nchọpụta gas | Shanghai Sunshine Teknụzụ Co., Ltd.
Non Dispersive InfraRed (NDIR) gas sensor bụ ụdị gas na-achọpụta ngwaọrụ nke dabere na ụdị mkpụrụ ndụ gas dị iche iche nke njirimara nhọrọ maka nso ụdị infrared, na-eji mmekọrịta dị n'etiti gas na ịmịkọrọ ọkụ (Iwu Lambert-Beer) iji chọpụta akụrụngwa gas. na itinye uche. E jiri ya tụnyere ụdị gas ndị ọzọ, dị ka ụdị electrochemical, ụdị combustion na ụdị semiconductor, ihe ntanetị gas na-abụghị dispersive infrared (NDIR) nwere uru nke ngwa dị iche iche, ndụ ogologo oge, nnukwu uche, ezi nkwụsi ike, na-akwụ ụgwọ, ụgwọ mmezi dị ala, nyocha ịntanetị na wdg. Ejiri ya na nyocha gas, nchedo gburugburu ebe obibi, mkpu mkpuchi, nchekwa ụlọ ọrụ, ahụike na ahụike, ịkọ ugbo na mpaghara ndị ọzọ.
Uru nke NDIR gas sensor:
1. Mgbochi nsị, enweghị nkwụnye carbon. Mgbe ihe mmetụta CAT na-atụ ụfọdụ gas, ọ dị mfe itinye carbon n'ihi oke ọkụ ọkụ, nke na-eduga nbelata nha uche. Igwe iko ma ọ bụ ihe nzacha na-echebe ihe ọkụ ọkụ na ihe mmetụta IR, ma ghara ịkpọtụrụ gas, yabụ ọ gaghị ere ọkụ.
2. Anaghị acho oxygen. NDIR bụ ihe nlere anya na anaghị achọ oxygen.
3. Ihe nlele nwere ike iru 100% v / v. Ebe ọ bụ na njirimara mgbaàmà nke ihe mmetụta NDIR bụ: mgbe enweghị gas ọ ga-atụle, ike mgbaàmà kachasị, nke kachasị elu, obere akara ahụ. Yabụ ịlele ihe ndị dị elu dị mfe karịa iji ihe dị ala.
4. Ezigbo nkwụsi ike ogologo oge na ụgwọ mmezi dị ala. Iguzosi ike nke ihe mmetụta NDIR na-adabere na ọkụ ọkụ. Ọ bụrụhaala na ọkụ ọkụ ahọrọ, ọ ga-eji 2 afọ na-enweghị mmezi
5. Wide okpomọkụ nso. Enwere ike iji NDIR nso - 40 ℃ ruo 85 ℃